RU PAUL ဆုရ AQUARIA သည်ခြေရာခံအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ရန်အတွက် HEAVEN NIGHTCLUB သို့ဝင်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည် - သတင်း
Ru Paul ဆုရ Aquaria သည်ခြေရာခံအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ရန်အတွက် Heaven nightclub သို့ဝင်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်
Ru Paul's Drag Race ရာသီ ၁၀ ဆုရ Aquaria သည်လေ့ကျင့်ခန်းများတက်ပြီးနောက် Heaven nightclub သို့ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါ။
Twitter တွင် Heaven ကိုစတင်စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်တွစ်တာကိုပယ် ဖျက်၍ ကလပ်ကိုတောင်းပန်ခဲ့သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကကလပ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုးစားစဉ် Aquaria နှင့်သူငယ်ချင်းများသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်လုံခြုံရေးရဲအရာရှိ၏နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အရှက်ရခြင်းများရှိသည်ဟုမနေ့ကတင်ခဲ့သည်။
Aquaria က 'ငါလိုလူတစ်ယောက်ဟာဘောင်းဘီကိုသာကလပ်ထဲမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါ ၀ တ်တာကိုလက်ခံဖို့ဘယ်လောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ' သူမအနေဖြင့်လီဗာပူးလ်အသင်းအားသပိတ်မှောက်ရန်အတွက်ပရိသတ်များအားအားပေးခဲ့သည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်သူမ၏ဇာတိမြို့ရှိလိင်တူချစ်သူအဖြစ်အပျက်ကိုခုခံကာကွယ်သောဒေသခံဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိဖုရား“ The Vivienne” အပါအ ၀ င်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ai-Art / tokyo / ထဲမှာ
ထိုကဲ့သို့သောအရှက်ကွဲခြင်း, အခြားပါရမီဘုရင်မတစ် ဦး brat တူသောသရုပ်ဆောင်! ငါ #drag #dragqueen #rpdr နေမကောင်းဘူး
မျှဝေသည် THE Vivienne (@thevivienne_) နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၈ တွင်နံနက် ၅:၂၄ နာရီ၊
Aquaria ၏ပထမဆုံးတွစ်တာကို Heaven က The Echo သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ 'Heaven Liverpool ဟာ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းမှာရှည်လျားပြီးဂုဏ်ယူစရာသမိုင်းရှိတယ်၊ ငါတို့သွားချင်တဲ့သူတိုင်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
“ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ Ru Paul Drag Queens အများအပြားကိုရောင်းအားပြပွဲတွေမှာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူခဲ့ကြပြီး၊ ကျွန်မတို့မွေးစားမိဖုရားတွေကတော့ပိုပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့အဆိုတော်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။
ဒေသခံမိဖုရားများစွာကိုလည်းရပ်ကွက်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ကူညီခဲ့သည်။ Heaven မှာလူတိုင်းကတန်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာ Aquaria ကိုတံခါးပေါ်လစီအကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်။ နှောင်းပိုင်းညတွင်အရက်ဆိုင်များနှင့်အားကစားဝတ်စုံများကို (အားလုံးမဟုတ်လျှင်) ခွင့်မပြုပါ။
Aquari နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအခြေအနေကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ သို့သော်ချက်ချင်းဆိုသလိုအခြေအနေသည်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်လုံးလုံးလျားလျားအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ Aquaria ကိုသူမဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။ '
မကြာခင်မှာပဲ Aquaria ကသူမရဲ့မူလ tweet ကိုဖျက်လိုက်ပြီးအောက်ပါတောင်းပန်ခြင်းကိုအွန်လိုင်းတွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ပရိသတ်များက ၀ န်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အနှုတ်သဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ကောင်လေးက ၂ စက္ကန့်အတွင်းဘီယာသောက်တယ်
ဒီကျောထောက်နောက်ခံ '' တောင်းပန် '' ကိုသာကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်အရပျ၌သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသောငါ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် bouncers ဆီသို့ ဦး တည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အဆင့်ကိုပြုသောအမှုအရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, တရားမျှတသနည်း ငါတို့တံခါးဝ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကို Fagot ဟုသင်ခေါ်ခဲ့သည့်အချက်ကိုမပြောပါနှင့်။
- ကားလ်မီလီဂန် (@karl_milligan) နိုဝင်ဘာ 13, 2018
အလေးအနက်ထားပြောရရင်မင်းကလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာမင်းပစ်ချလိုက်တဲ့မင်းနဲ့တောင်းပန်တာပဲ။ ယူကေမှာရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံတာကြောင့်မင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဘာလဲဆိုတာကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်အောင်ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်။ သင်၏အခွက်တဆယ်ကိုချိန်ပါ
- J Clinick-Donnelly (@ j190582) နိုဝင်ဘာ 12, 2018
လူထု၏အော်ဟစ်သံကြောင့်သူမသည် Drag Mother ကိုမရပ်တန့်အောင်တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးကလပ်ဝတ်ရုံတွင်ရွေးချယ်မှုအတွက်သူမအားလေးကြိမ်မြောက်ဆုရှင် Sharon Needles ကိုဖတ်ရှုသည်။
ငါဒီနေ့ငါ့ရဲ့ Adidas jogger တွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ငါဝတ်မယ်ထင်တယ် .. နောက်နေတာပါ။ ငါ shit ဝတ်ဆင်ကြဘူး!
- Sharon Needles (@SHARON_NEEDLES) နိုဝင်ဘာ 12, 2018
လီဗာပူးလ်တက္ကသိုလ်၌ပညာသင်ကြားနေသောဘာသာစကားကျောင်းသားများဖြစ်သောဂျိုဒီနှင့်အဲရစ်တို့ကလီဗာပူးလ်အသင်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။ 'Heaven ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုအနိုင်ကျင့်တာကအဆင်ပြေပါတယ်။ သင်ကလပ်တစ်ခုမှပယ်ချခံရခြင်းကြောင့်သင့်အားတစ်မြို့လုံးလိင်တူချစ်သူအဖြစ်အပျက်ကိုဖြိုဖျက်ရန်သင့်အားအခွင့်အရေးမပေးပါ။ သူမကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာရှင်းပြမယ့်အစားပေါ်လာဖို့သင့်တယ်။ မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး၊ ရန်လိုစရာမလိုဘူး။ '
အထူးသဖြင့်လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်မြို့ရဲ့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူမတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုသူမ LGBTQ + ပြintoနာအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ သူကငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သံအမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမပလက်ဖောင်းကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်။ '